> Resource> égwu> Olee otú Download Flappy Nnụnụ maka iOS na Android na kemgbe wetara
The "Flappy Nnụnụ" Onye Okike wetara egwuregwu nanị n'ihi na ọ bụ kwa "na-eri ahụ" n'ihi na ọtụtụ egwuregwu, bụ ndị ọbụna nwere ike ghara ịda n'ụra maka ya. Nke ahụ bụ n'ezie a ọmịiko, ma adịghị ụta ya. Ọ dị nnọọ chọrọ na egwuregwu nwere ike ime ka ndụ gị ka mma, ọ bụghị njọ. Ọ bụrụ na ị ka nwere ike ghara ịda n'ụra maka adịkwa ya, ebe a ka na-agwa gị ụfọdụ obere aghụghọ na-ehichapụ Flappy Nnụnụ azụ ọzọ.
1. Jailbreak Your iPhone ma ọ bụ iPad ibudata Flappy Nnụnụ
2. Download Flappy Nnụnụ na gị android ngwaọrụ
3. Chọta Flappy Nnụnụ Alternatives
Ọ bụ ezie na Flappy Nnụnụ e wetara si App Store, ị ka nwere ike ịhụ ha n'ụzọ ndị ọzọ. Mbụ, i kwesịrị jailbreak gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka. Ọ bụrụ na gị iPhone ma ọ bụ iPad bụghị jailbroken, ị pụrụ ịmụta otú site online Nkuzi n'okpuru:
N'ihi na iPhone ọrụ: Olee jailbreak gị iPhone na nzọụkwụ
N'ihi iPad ọrụ: Olee jailbreak gị iPad
N'ihi iPod aka ọrụ: Olee jailbreak gị iPod aka
Mgbe jailbreaking ngwaọrụ gị, ị nwere ike ibudata Flappy Nnụnụ na-atọ ndị ọzọ Chinese ngwa-echekwa dị ka Tongbu. Arapara na n'ime iTunes, na gị jailbroken iOS ngwaọrụ ga mmekọrịta na wụnye ya.
Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka jailbreak gị iOS ngwaọrụ, e nwekwara a ụzọ. Ị nwere ike iji Chinese ngwa aha ya bụ Kuaiyong, ma nke a ụzọ na-adịghị atụ aro ya. Ọ bụ ihe ize ndụ nke gị data na ngwaọrụ.
Ihe bụ ihe ọzọ, ma ọ bụrụ na ị nwere otu puku bucks na-ala n'iyi, ị nwere ike mgbe niile ịzụta a ekwentị na egwuregwu-eji n'elu na eBay (N'ime na hotbed nke offbeat entrepreneurialism maara dị ka eBay, nza nke ahịa na-etinye elu iPhones na gam akporo igwe na Flappy Nnụnụ-eji arụnyere.). Ọ bụ mara mma oké ọnụ maka na-ekpo ọkụ nke Flappy Nnụnụ na nso nso.
Dị ka ị pụrụ ịgụ site na-ekpo ọkụ ozi ọma na nso nso, onye kere naanị wepụrụ Flappy Nnụnụ si App Echekwala na iOS ọrụ ike na-ibudata ya conveniently. N'ihi na Android ọrụ, e nwere ọtụtụ ụzọ. Dị nnọọ oghe a nchọgharị na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba na isi ka a-atọ ndị ọzọ Android ngwa ahịa dị ka Google Play. Chọta Flappy Nnụnụ egwuregwu ibudata na wụnye ya na ngwaọrụ gị.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịhọrọ kpọmkwem ịchọ Flappy Nnụnụ na Google, na i nwere ike na-na-ọtụtụ ngwọta àjà ụzọ ibudata Flappy Nnụnụ.
N'ezie, ị nwere ike họrọ ihe dị egwu ọzọ ka Flappy Nnụnụ egwuregwu ma ọ bụrụ na ị na-adịghị na-emetụta ya bụghị mbụ. E nwere 5 kasị mma Flappy Nnụnụ edochi anya n'ihi unu:
Ironpants bụ ugbu a nketa o ka Flappy Nnụnụ, na-ewere n'elu dị ka Nke 1 egwuregwu na ndepụta nke free ngwa ọdịnala na App Store (anọ Android.). Nke a free aha-anọchi nke nnụnụ na-underpants-yi dike, na N'adịghị ka "Flappy Nnụnụ," chọrọ ka ị jide ihuenyo ka ofufe gaba n'iru kama dị nnọọ enweta ya. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ọ pụrụ ịbụ a obere ike.
N'ihi na iOS ọrụ; N'ihi na gam akporo ọrụ
Ọ bụ na ma iOS na Android, na-enye gị ohere na-egwu kpọmkwem otu egwuregwu ma na a anu. Iji ngosi, ndị artwork na Flappy Bee bụ ọtụtụ nicer karịa ọtụtụ n'ime ndị nke ọzọ Flappy Nnụnụ clones.
3) Super Ball Ukwuu n'Aka (iOS - Free)
Na Super Ball Ukwuu n'Aka, dị ka Flappy Nnụnụ, na ị na-ọrụ dị mfe, na fọrọ nke nta unbearably manụ (ruo mgbe ị ga-esi ezi ihe na iti gị elu akara, na bụ). Niile i nwere ime bụ Kpatụ ihuenyo ka agaghịkwa na obi ụtọ, na-adịghị ka ọ dobe. Ọ bụrụ na ị ka ọ dobe, ị hapụ.
N'ihi na iOS ọrụ
Kama dina site na ikuku na dodging oke green ọjà, gị ugbu a ga-elekwasị anya na-eme a azụ ibiaghachi site mmiri n'okpuru osimiri mgbochi. Ọ bụ ezigbo nnọọ otu ihe ahụ echiche, ma ya yiri a tad bit mma. Ndịna-emeputa anya a bit ọzọ nụchara anụcha.
5) ntugheriukwu Nnụnụ (Android)
Egwuregwu si premise dị mfe, ndị dragons Ezuru nnụnụ si àkwá (-eche ihe mere!) Ị ga-enyere nnụnụ chọta ha mgbe dodging dị iche iche ihe mgbochi. E wezụga skeletal akụkọ, na gameplay bụ kpọmkwem otu ihe ahụ dị Flappy Nnụnụ. Gịnị dị iche abụọ egwuregwu bụ artwork, music na eziokwu na nnụnụ na egwuregwu a anya dị ka a nkume Iwe Nnụnụ
N'ihi na gam akporo ọrụ